Dhijitari Muviri Mutauro paIyo Ekushambadzira Pamusangano | Martech Zone
Dhijitari Muviri Mutauro paIyo Inotengesa Pamhepo Summit
China, May 21, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kubva nhasi, rondedzero yangu yemabhuku ekuverenga yakangowana imwe yakadzika. Ndakave nemufaro wekutaura pa Pamhepo Kushambadzira Summit muHouston panzvimbo yeCompendium.
Pamusangano zvakare Steven Woods Eloqua. Kutaura kwaSteven uye hurukuro dzepaneru dzaive nenjere uye kumutsa kufunga. Steven aburitsa bhuku, Dhijitari Mumuviri Mutauro - Kududzira Kuteedzera kweVatengi muNyika yepamhepo:
Kushambadzira kuri kuita shanduko huru yakaunzwa neshanduko munzira iyo vanhu vanowana nekushandisa ruzivo. Kunyangwe iko kugona kweGoogle kuita kuti zviwanikwa zvemashoko zveInternet zviongororwe kana zvemagariro venhau kugona kubatanidza vanhu nevezera ravo maonero anovimbika pazvigadzirwa nemasevhisi, nzira iyo yatinowana nayo ruzivo uye nekutsvaga zvigadzirwa zvachinja zvakanyanya.
Musoro wehurukuro yaSteve yaive: Maitiro ekuti unzwisise zvirinani maitiro evatengi vako epamhepo uye purofiti kubva pairi. Steven anopa mazano kumakambani anoshuvira kukura kushambadzira kwavo uye kuwedzera kutengesa kwavo ku:
Unleash yako info.
Tora data zvakanyanya.
Vaka tsika ye analytics.
Iyo mameseji yakaramba yakaenzana mukati memusangano - shandisa maturusi zvinobudirira, shandisa data kuwedzera kukosha uye mhedzisiro nevatengi vako uye tarisiro, uye gara uchiyera. Nenzira, vatauri vese zvakare vakasundidzira vaipinda kuti vawedzere kuedza kwavo kutsvaga enjini yekuedza.
Shamwari Richard Evans anobva kuSilverpop yaive nemimwe mhedzisiro inomanikidza yekumisikidza midhiya enhau uye mabhukumaki marinki mukati meemail Zvinongedzo zveDigg zvakakunda zvakanyanya, asi mamwe maratidziro ekusimudzira mameseji muFacebook akaita zvakanaka, futi. Richard akavimbisa yekutevera whitepaper yekuti magariro enharaunda anoita sei muemail. Zvichida ndinogona kutora kopi yekutanga kuti ndigovana kufanoona nemi vanhu!
Email's Basa richiri rakakosha
Yakareba nguva shamwari, chipangamazano, uye mutauri weveruzhinji Joel Bhuku vakaita basa rakanakisa rekutsanangura shanduko yekushambadzira uye kuti email inoenderera sei ichiita basa rakakosha mukutaurirana kwedu kwezuva nezuva. PaCompendium, tinoshandisa ExactTarget uye 5Buckets zvakanyanya kumutsa nhimbe dzedzidzo kubva kuSalesforce.
Email inoramba ichiwedzera kutaurirana kwedu kune vatengi vedu pasina chikonzero chekuwedzera zviwanikwa ExactTarget inoita chinzvimbo chakakosha mukukwanisa kwedu kukura necustomer vatengi, izvo zvinozovandudza mhedzisiro yavo ... uye pakupedzisira inotungamira mukuvandudzwa kwekuchengetedza.
Munzvimbo yemagariro enhau, hazvishamise kuti vese vari vaviri Facebook uye Twitter vari kushandisa email zvinobudirira senzira yekusunda yekuchengetedza vashandisi vavo kuti vabatikane uye vadzokere kumawebhusaiti avo.
Tags: Brand Kuongororaeloqua
CSS Optimization yePod uye iPhone Safari
Kutenda nemashoko emutsa, ndinovimba unonakidzwa nebhuku iri. Ndiri kutarisira kubatana zvakare pachiitiko chinotevera.